Madaxweyne Mustafe Cagjar Maxa Loo Bedelayaa ? Barkhad-Ladiif Mohamed Omar | Baligubadlemedia.com
Madaxweyne Mustafe Cagjar Maxa Loo Bedelayaa ? Barkhad-Ladiif Mohamed Omar
Deegaanka Soomaalida waxa dawladda dhexe u qaabilsan Axmed Shide oo xisbiga soomaalida gudoomiye ka ah, isagana far ku walaaqa kolba ku doonno calmada kii uu fahmi waayana meesha ka tukhaantukhiya.
Mustafe Cagjar waa shakhsi ka mid ahaa dulmi diidkii dhibaataddu ka soo gaadhay nidaamkii Cabdi Iley, haseyeeshee mudadii uu joogay wuxuu tahli kari waayey inuu dib ugu soo celiyo dawladnimadii deegaanka soomaalidda, waxay gaadhay in caasimadii jigjiga shanta galabnimo la kala hoydo amni daro awgeed, in dadkii siyaasadii kala kaxayso oo xiitaa hoteeladii la kala yeesho kooxiba goob ku shirto iyo inay noloshii sii qaali garowdo wax waliba qaali noqdo .
Sidoo kale, waxa
lagu dhaliilaya jileec hogaamineed oo aanu lahayn go’aan qaadasho wax ku kala goyn karo, dadka u dhuun daloolaana waxay ku eedeeyaan inuu dadka dhagaysto balse ay ku adag tahay inuu fuliyo talooyinka loo soo jeediyo.taasina waxay keentay inay kala fogaadaan ragii ay wada socdeen ee ay isku mabda’ ahaayeen, kuwaas oo hadda mucaarad adag ku ah oo doonaya in la bedelo.
Markaad dadka deegaanka la sheekaysato labay u qaybsan yihiin, kuwo taageersan iyo kuwo ka soo horjeeda, inta badan dadka taageersani waa beelihii dhibaatadda ugu weyn ka soo gaadhay maamulkii hore ee Cabdi Iley, kuwaas buu awooda saaray oo awal xilalka dawladda oo ay ka qatanaayeen uu isagu xilal badan siiyey, kuwa ka soo horjeeda waa beelaha deegaankiisa ah oo laba u sii kala qaybsan oo badankoodu aaminsan inay iyagu awoodda ugu badan leeyihiin,isla markaana iyaga wax walba laga fuul yeelo.
Mar hadii Mustafe Cagjar oo ka soo jeeda Dhagax buur hogaankiisa iyo maamulkiisaba la dhaliilay, hadda waxa xilka loo cumaadayaa masuul reer Qabritahare ah oo ay isku deegaan yihiin Cabdi Iley.
Itoobiya hadii ay mar ku qanuunto way adagtahay siday kaaga fuqdo inay kula degto mooyee, marka waxay u badan tahay inuu meesha ka baxo.
Baligubadlemedia Masuul Kama Aha Aragtida Dadwaynaha